Minisitra Volahaingo – Taona 2020: « Handray mpampianatra Fram miisa 15 000 isika » | NewsMada
Minisitra Volahaingo – Taona 2020: « Handray mpampianatra Fram miisa 15 000 isika »
“Handray mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana 1 5000 mahery isika amin’ity taom-pianarana 2019-2020 ity. Efa nolanian’ny depiote tamin’ny fandinihana ny tetibola ho an’ny taona ho avy izany… Mbola mitohy hatrany koa ny fanofanana ireo mpampianatra”, hoy ny minisitra Volahaingo Marie Therese, tany Vatovavy Fitovinany, ny herinandro teo. Nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao ny tenany tamin’izany.
Nampahafantariny tamin’izany fa hanorenana sekoly manara-penitra ireo distrika efatra any amin’ireo faritra ireo, araka ny tetikasan’ny filoham-pirenena. Anisan’izany ny any Vohipeno, Manakara, Mananjary ary Farafangana. “Efa manomboka ny asa any Farafangana amin izao fotoana izao ary hanomboka tsy ho ela ny ao Manakara sy ny hafa koa”, hoy ihany izy. Hahazo fitaovana toy ny solosaina sy “tablette” ireo lycée sy CEG marobe manerana ny Nosy. “Tanjona ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana arahin’ny fampitomboana ny isan’ ireo ankizy miditra an-tsekoly”, hoy ny minisitra.
Ankoatra izany, nambarany fa hanatanteraka fambolen-kazo faobe ny minisitera, amin’ny 19 janoary 2020 ho famerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso, miainga amin’ny tetikasan’ny filoham -pirenena andry rajoelina. Hamboly zanakazo dimy avy ny mpianatra rehetra.